“Warbixin” Nin iska ooyay markuu dhagaystay garaaca wadnaha gabadhiisa oo dhimatay. | Calanside
“Warbixin” Nin iska ooyay markuu dhagaystay garaaca wadnaha gabadhiisa oo dhimatay.
Way i badbaadisay uma abaalgudikaro. Waxaan jeclaan lahaa in aan u abaalgudikaro laakiin ma awoodo,” Jack ayaa sidaas u sheegay telefeshinka WAFB. Hadda waxaan samayn karaa oo kali ah in aan jacayl la wadaago qoyskeeda ayuu intaas ku daray.